Soomaaliya waa inay cagaheeda isku istaagto inta aysan gelin isbaheysiga Dalalka Geeska Afrika (Qormo Xasan Sheekh) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Bishii Maarso 1977, Itoobiya iyo Soomaaliya waxay qarka u fuuleen dagaal la xiriiray gobolka Ogaadeen, oo ay labada dowladoodba sheeganayeen.
Madaxweynihii kacaanka ee Cuba, Fidel Castro wuxuu safarro degdeg ah oo quus ah ku tagay Geeska Afrika isaga oo xambaarsanaa qorshe dhiifoon oo ku aaddan sidii nabadda loo ilaalin lahaa: isaga oo taageero ka helaya Midowgii Soofiyeetka, wuxuu soo jeediyey inuu mideeyo Itoobiya, Soomaaliya, Koonfurta Yemen iyo Dhulkii uu gumaysanayay Faransiiska ee Canfarta iyo Ciisaha ee markaas xorriyadda qaadanayay (hadda ah Jabuuti) si uu uga dhigo Dowlad wayn oo haysata shuuciyadda Marxist-Leninist taas oo quuddarraynaysay inay la wareegto xukunka Badda Cas iyo dhammaan marinnada muhiimka u ah Suways Kanaal.
Al-Shabaab waxay wali sii waddaa inay maamul barbar socda kan dowladda ku leedahay qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda ah iyo koonfurta Soomaaliya, oo ay ku jiraan deegaannada ku teedsan xudduudaha Kenya iyo Itoobiya. Ka hor inta aysan dowladda Soomaaliya billaabin inay ka fekerto inay qoto dheerayso xiriirka ay la leedahay dalalka deriska ah isla markaasna ay oggolaato isu socod xor oo ka hirgela soohdimaheeda, waxay u baahan tahay inay adkayso xukunka soohdimahan iyo gobollada kale ee haatan ku jira gacanta kooxda Al-Shabaab.
Si hiigsigaas loo gaaro, dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika waxay u baahan yihiin inay dib u billaabaan hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, oo aan kaliya lagu soo koobin xorraynta deegaannada Al-Shabaab ka taliso, balse ka shaqeyso sidii deegaannadaasi la xorreeyey loo sii haysan lahaa si ay dowladda ugu hanato quluubta dadka.
Sidoo kale waa in dowladnimada heer federaal iyo gobolba uu xoogaystaa ka hor inta qorshaha isu-tagga gobolka uusan sii socon. Muddadii aan madaxweynaha ahaa, Soomaaliya waxay billowday geeddisocod federaalayn oo adag annagoo ku guulaysannay inaan yagleelno afar dowlad goboleed. Horumar baaxad wayn leh ayaa billowgii laga sameeyey dowlad dhisidda iyo dib u heshiisiinta qabaa’ilka iyo joojinta colaadaha gobolka.
Balse isla markii uu awoodda la wareegay sanadkii 2017, maamulka hadda jira ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed wuxuu kala diray hoggaanka maamul goboleedyadii curdunka ahaa wuxuna boosaskooda ku baddalay hoggaan xulufo asaga la ah, isagoo wiiqay geeddisocodka federaalaynta isla markaasna abuuray colaad lala galay maamul goboleedyada.
Maadaama uu meesha ka baxay xiriir xooggan oo lala yeesho dowlad goboleedyada, dowladda federaalka waxay had iyo goor ku tiirsanayd ciidamo Itoobiyaan oo aan hoos tagin hoggaanka Midowga Afrika si ay u horumariso danaheeda siyaasadeed ee ay gobollada ka leedahay. Bishii Diseembar 2018, tusaale ahaan, waxay amar ku siisay ciidanka Itoobiya inay soo xiraan afhayeenkii hore ee Al-Shabaab oo u tartamayay doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee markaas la sameeyey.
Xariga Mukhtaar Roobow wuxuu sabbaay mudaharaadyo maalmo socday oo ka dhacay Koonfur Galbeed, iyadoo markii danbe ciidanka amniga ee federaalka ay dibadbaxayaal ku dileen. Xadgudubyada noocan oo kale waxay kaliya sii qoto dheereeyaan tuhunka dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan Itoobiya, taas oo iskaashi lala yeesho mustaqbalka ka dhigaysa mid adag.
Horumarinta dowladnimada waxaa sii dheer in Soomaaliya ay u baahan tahay inay xoojiso hay’adaheeda dimuqraaddiyadda ka hor inta aysan raadin xiriiir dhow la yeelashada dariskeeda. Hal sabab oo jamashada dowladda hadda jirta u qabto dadaallada midaynta ay u noqotay mid dood badan dhalisay ayaa ah in dadka Soomaaliyeed ee caadiga ah aysan ku lahayn inay wax badan ka yiraahdaan qaddiyadda.
Halka dowladihii hore ay had iyo goor si dhow ugala tashan jireen baarlamaanka iyo maamul goboleedyada arrimaha qaran ee muhiimka ah, dowladda hadda jirta waa ay daba rogtay dhaqankaas siyaasadeed iyadoo go’aannada si kaligeed ah u gaarta. Si ay u billowdo dayactirka iyo ugu danbayntiinna xoojinta hay’adaheeda dimuqraadiyadeed, dowladda federaalka waxay u baahan tahay inay soo celiso caadadii wada-tashiga.
Qormadaan oo Af Ingiriis ku qoran waxaa daabacay Wargeyska Foreign Affairs